Sanga Collection – iAfrika
Sicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sanga Collection ikhiqiza umkhiqizo wohlobo oluthile lwesikhumba senkomo olwehlukile. Chofa LAPHA ukubona okuningi.
Uma uphupha ugqoke izicathulo, uma zizintsha futhi zicwebezela kusho ukuthi uzophumelela, kodwa uma zindala kusho ukuthi uzoba nezinkinga. Enye incazelo yokuphupha ngezihlangu kumbe izicathulo ngeyokuthi kuyibika lokuthi esikhathini esingeside kunohambo oluzovela okumele uluthathe. Uma izicathulo zikumpintsha usuzigqokile lolo hambo lusuke luzoba nenkinga oluzoziletha kuwena, kungaba ukuphuka komoya ngozokuzwa, yingxabano ezoba khona nabanye abantu kulolo hambo … Read more
Tags Izicathulo, Izihlangu, Izingubo, Ukugqoka
Asho ukuthini amaphupho ngomsebenzi nesikole? Lokhu kuhlanganisa umqashi, umsebenzi nokukhushulwa emsebenzini, izincwadi, iziqu, imfundo, ipeni noyinki, izivivinyo namayunivesithi.
Tags Imfundo, Imisebenzi, Isikole
Amaphupho ngokuzwa ukukhala
Uma uphupha ukuthi uzwa umuntu okhalayo kusho ukut
Uma uphupha ubona izinyosi kusho ukuthi kukhona abaphokophelele ukukuthola. Uma zikutinyela kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ezisemqoka kuwe.
Uma uphupha ubona imbuzi kusho ukuthi uzoba nenhlanhla uma imbuzi imhlophe kodwa ishwa uma imnyama.
Tags Izilwane, Izimbuzi
Amaphupho ngenyama yenkomo
Uma uphupha udla isiteki senkomo isitshulu noma inyama egayiwe kusho ukuthi ishwa nokulahlekelwa kuyakunyonyobela. Amaphupho ngenyama engaphekiwe.
Amaphupho ngotshwala besintu ayibika lokuthi idlozi lakho alijabulile. Lokho kusho ukuthi kukhona okuthile okumelwe ukulungise okuqondene nomsamo wakho, ngakho ke kubalulekile ukuba uqaphele indawo okuyo nabantu abasuke bekhona kulelo phupho. Isibonelo nje: uma uphupha uphuza kuleyo ndawo kukhona nengane oyizalayo, lokho kungaba yisixwayiso sokuthi kusamelwe uyenzele umcimbi wokuyibika emsamo ngendlela efanelekile leyongane, kungaphinda futhi kube … Read more
Amaphupho ngokuthenga ukudla
Uma uphupha ukuthi uthenga ukudla kusho ukuthi kukhona into ozoyithola maduzane ikakhulukazi uma kungukudla okuphekiwe noma okuthengwa kudlelwe ekhaya. Amaphupho ngokudla.
Amaphupho ngengubo yokugqoka yabesifazane
Uma uphupha ukuthi ugqoke ingubo kujwayele ukuba ibhadi ikakhulukazi uma ingcolile noma idabukile. Kepha uma inombala omnyama noma oyigolide uzoba nenjabulo futhi uzothola umvuzo kumsebenzi onzima owenzile.
Amaphupha anezincazelo ezahlukene, kukhona lezo eziqondile kuphinde kubekhona nalezo ezifihlekile. Ukuphupha amaphoyisa kusho okungekuhle, okungabalwa phakathi kwakho izitha zakho, noma ke isifo esiza koseduze nawe. Uma uphupha ukuthi ubona amaphoyisa noma amasosha, kusho ukuthi kunento embi esazokwenzeka. Uma ulwa noma uxoshwa ngamaphoyisa lokho kusho ukuthi kunezitha ezikuthakathayo noma ezikugadla ngemithi.